Samachar Batika || News from Nepal » म्यासेजमा केटाहरुले कहिले बिहे गर्ने हो बुढी भनेर जिस्क्याउछन
२०५५ सालमा अर्घाखाँचीमा जन्मिएकी एलिना रायमाझी मोडलिङ र फिल्ममा जम्ने पुरापुर लक्ष्यसाथ विगत ६ वर्षअघि राजधानी काठमाडौ आएकी हुन्। नेपाली चलचित्र धुम थ्री र हिरो नं. १ मा नायिकाका रूपमा खेलिसकेर नेपाली चलचित्रार क्षेत्रमा होमिएकि रायमाझि लगभग १ सय ५० वटा म्युजिक भिडियोमा अभिनय गरि छन्।
उनी अहिले दरबारमार्गमा रहेको आफ्नै दोहोरी साँझमार्फत सांगीतिक यात्रामा जमिरहेकी छन्।यिनै सुन्दरीसँग प्रेम, विवाह, सांगीतिक क्षेत्र, सेक्सलगायतका विषयमा भवनाथ प्याकुरेलले लिएको अन्तर्वार्ता आजको राजधानी दैनिकमा छापिएको छ ।
त्यसको केही अंश :तपाईंले बिहेबारे केही सोच्नुभएको छ?
मलाई मेरो परिवारलाई पनि बुझ्ने केटा जीवनसाथी होस् भन्ने चाहन्छु। जसले मलाई रुवाउने काम नगरोस्। ग्लामर क्षेत्रलाई छोड नभनोस्।
युवायुवतीबीच हुने प्रेम कस्तो लाग्छ?
राम्रै लाग्छ, म प्रेम गरेरै विवाह गर्छु। त्यो भयो भने बुझ्न पाइन्छ।तपाईंलाई प्रपोज गर्ने कति आए? मलाई प्रपोज गर्ने १ हजार जति आए होलान्। म्यासेजमा कहिले विवाह गर्ने बूढी भनेर जिस्क्याउँछन्।तपाईंलाई कस्ता केटा मन पर्छन्?सफा, हेन्डसम, स्मार्ट, नरम र सबैको इज्जत गर्ने व्यक्ति मन पर्छ। तर अहिलेको जमानामा माया र इज्जत गर्ने धेरै पाइँदैनन्।
राम्रा केटा देख्दा मन कस्तो हुन्छ?
मेरो भइदियोस् जस्तो लाग्दैन। तर उसको आनीबानी देख्दा उसलाई सुहाउने केटी मिलोस् भन्ने लाग्छ।ब्वाई फ्रेन्ड परिवर्तन गर्नेलाई के भन्नुहुन्छ?मलाई त्यसो गरेको मन पर्दैन। अहिले गाउँदेखि सहरसम्म यस्तो धेरै देखिन्छ। यसरी परिवर्तन नगरेकै राम्रो।
प्रकाशित मिति १३ माघ २०७६, सोमबार ०४:५८